Voolswaagan gara Itoophiyaa dhufuun gatii konkolaataa hir'isa laata? - BBC News Afaan Oromoo
Voolswaagan gara Itoophiyaa dhufuun gatii konkolaataa hir'isa laata?
Dhaabbatni konkolaataa Jarman Vools Waagan Itoophiyaa keessatti gama garaagaraan hojii jalqabuuf qorannoo bu'aa qabeessummaa taasisuuf, bakka pireezidaantiin Jarmanii argamanitti Koomishinii Invastimantii Itoophiyaa wajjiin waliigaltee mallatteesseera.
Qorannoon bu'aa qabeessummaa kun Itoophiyaa keessatti warshaa konkolaataa walitti tolchu, miiya geeddaraa konkolaataa dhiyeessuu, wiirtuu leenjii banuufi meeshaalee teekinoolojii haaraa beeksisuufaa irratti akka xiyyefatu waliigalticha irratti ibsameera.
Vools Waagan oomishtoota konkolaataa addunyaa irraa warra dursan irratti maqaan kan waamamu yoo tahu, Afrikaa keessattis waggaa 65 duraa jalqabee oomishuu eegale.
Konkolaataa oomishuun eenyutu dursa?
Konkolaataa, Xiyyaara, saaxinii bifa qaaraatiin awwaalamuu barbaadduu?
Dabalataanis dhaabbatichi Aljeeriyaa, Ruwaandaafi Keeniyaa keessatti warshaa konkolaaataa walitti tolchu kan Itoophiyaatti banuuf yaade waliin wal fakkaatu akka qabuufi dhiha Afrikaattis banuuf yaada qaba.
Kana dura oomishtoonni konkolaaataa walitti tolchan Itoophiyaatti hojii haa jalqabaniyyuu malee gabaa irratti jijjirama akka hin finne daldaltoonni gita kanarra jiran ni dubbatu.
Itoophiyaa keessatti konkolaataan tokko namoota kuma tokkoof akka gahu odeeffannoon karaa dhaabbata Delooyit jedhamu waggooti muraasa dura bahe ni hima.
Kunimmoo Itoophiyaan adduyyaarra lakkoofsa konkolaataa xiqqaa akka qabdu agarsiisa.
'Jijjiiramni ni jiraata jedhee hin amanu'
Kanaafimmoo sababiin guddaa qaraxa Itoophiyaan konokolaataa irrattti keessee akka tahe Finfinnee keessatti daldala konkolaataa irratti bobba'anii kan jiran obbo Henook Damissaw ni dubbatu.
Obbo Henook dhaabbatni Konkolaataa walitti tolchu Vools Waagan Itoophiyaatti banamuun carraa gaarii akka tahe himuun haatahu malee sababiin qaala'insa konkolaataa biyyatti garuu qaraxa ta'uu himaniiru.
''Vools Waaganis gatii biyya keessa qabaatu hin sirreessu taanaan jijjiiramni ni jiraata jedhee hin amanu'' jechuun dhimma qaraxaa deddeebisanii kaasu.
Akka muuxannoo isaaniitti yeroo baayyee oomishooti Vools Waagan gara biyyaatti yoo galan iyyuu miiya jijjiirraa gatii hin qabneef namooti komii kaasu.
Banamuun warshaa kanaas rakkoo kana furuuf gargaara malee gatii irratti jijjiirama fida jedhanii akka hin yaanne dubbatu.
Itoophiyaa keessatti konkolaataawwan dhuunfaafi daladaaf jedhamanii gara biyyaatti galaniif haalli qaraxaa shan jira.
Gama konkolaatawwan dhuunfaatiin humna mootoraa qabaniin qaraxa harka 60 -100 akka kaffalan odeeffannoon waajjira Galiiwwaniifi Gumrikirraa aragame ibsa.
Konkolaataawwan gara biyyaatti galan irratti qaraxni barbaachisu kaffalamee baasiin konkolaatichi baase yoo shallagamu gatii konkolaatichi itti oomishame ni caala.
Kunis Itoophiyaa keessatti hamilee namoota konkolaataa bituu barbaadan irratti dhiibbaa ni uuma jedhama
Gatiin konkolaata qaalii tahee otoo jiruullee keesumaa Finfinnee keessatti fedhiin bittaa konkolaataaf jiru dabaluun, namooti konkolaataa dhuunfachuu barbaaduun isaanii dabalaa akka jiru agarsiisa.
''Konkolaataa dhuunfachuun qananii miti''
Adde Kadijjaa Hasan hojii daldalaa irratti kan bobbaate yoo tahu hojii ishee salphisuuf jecha konkolaataa yoo bituu yaaddeyyuu sababii gatiinsaa qaalii taheef bitachuu akka hin dandeenye himteetti.
Taaksii idileetti fayyadamuun hojii irratti boodatti harkifachuu akka uumuu himuun konkolaataa dhuunfachuun waan qananii akka hin taane dubbatti.
Konkolaatonni akka Vools Waagan biyya keessatti hojii otoo jalqabanii gatii gabaa hir'isuu danda'as jetti.
Daariktara sab-quunnamtii Koomishinii Invastmantii Itoophiyaa kan tahan obbo Mokonnin Haayiluu Vools Waagan Itoophiyaa keessatti warshaa konkolaataa walitti tochu banuun biyyaa darbee biyyoota Afrkaa Bahaattillee bal'isuun diinagdeef bu'aa qaba jedhu.
Dabalataan namoota baayyeef biddeen akka baasuu, cee'umsa teekinolojii ammayyaatiifi abbootiin qabeenyaa biyya keessaa invastimantii mataa isaanii akka jalqaban carraa uuma jedhaniiru.
Goodayyaa suuraa Kaampaaniin Volkswagen konkolaattota 'beetle' jedhaman kanaan beekama
Gama biraan Itoophiyaa biyya Invastimantiif mijattuu tahuu kan agarsiisuufi dhaabotni idila addunyaa hawwachuufis shoora qaba jedhaniiru.
'Vools Waagan biyyatti oomishuu jalqabuun sharafa alaa illee ni hir'isa'' jedhaniiru.
Kana dura oomishtoonni konkolaataa kanneen akka Toyoottaafi Liifaan Motoras Itoophiyaa keessatti yeroo dheeraa kan turaniifi bu'aa qabeessa tahuun lammiilee fayyadaa akka jiran eeraniiru.
Sanada waliigaltichaa irratti hojichi haala danda'ameen dafee hojii akka jalqabuu beeksisuun alatti eessaafi dhimmooti wal qabatoo biroo akka hin baramne himanii dhaabbatichi lafa naa mijata jedhutti ijaaruu akka danda'au dubbataniiru.
Warshaa konkolaataa: Eenyutu hunda dursa?
Viidiyoo Hawaa'iitti laavaan volkaanoo Kiliweeya konkolaataa liqimse